Amal Clooney - ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကို Meghan Markle နဲ့မျှဝေခဲ့ပြီးဘယ်တော့မှမထုတ်ဖေါ်ခဲ့ပါ။ - Teles Relay
Amal Clooney - ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကို Meghan Markle နဲ့မျှဝေခဲ့ပြီးဘယ်တော့မှမထုတ်ဖေါ်ခဲ့ပါ။
By Alexis WAYAN On သြဂုတ်လ 11, 2020
သူကအင်္ဂလိပ်တော်ဝင်မိသားစု၏ပရိတ်သတ်များကောင်းစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါလိမ့်မည်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိ တွေ့ရှိချက် လွတ်လပ်ရေး (Meghan နှင့်ဟယ်ရီ ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့်) သြဂုတ်လ 11 ရက်နေ့တွင်ဗြိတိန်စာအုပ်ဆိုင်ထဲမှာထုတ် နှင့်ပြင်သစ်များအတွက်သြဂုတ်လ 13။ ထို့အပြင် Omid Scobie နှင့် Carolyn Durand တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သောစာအုပ်သည် Meghan Markle နှင့် Prince Harry တို့အကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်လည်း Megxit ၏နောက်ကွယ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်ဝေဖန်မှုများကိုဝေမျှထားသည်။ ဤစာအုပ်သည် Sussex ၏ Duchess of Duchess ၏ကိုယ်ဝန်ကိုလည်းပြန်ကြည့်။ အရေးကြီးသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည်။ အနာဂတ်မိခင်သည်ကလေးမွေးပြီးနောက်လအနည်းငယ်အကြာတွင်ကလေး၏လိင်အကြောင်းသိပြီးဖြစ်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကသတင်းအချက်အလက်တွေကိုဆက်ပြီးလောင်းနေတယ်။
« Archi မွေးဖွားချိန်တွင် Harry နှင့် Meghan တို့တွင်သွားရန်အဆင်သင့်ရှိသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစုံတွဲကယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ရမယ်ဆိုတာကိုအစကတည်းကသိခဲ့လို့ပဲ”ရှာဖွေခြင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဖော်ပြသည်။ “ ရင်းမြစ်တစ်ခုရဲ့အဆိုအရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရက်သတ္တပတ်အတွင်းသူတို့သား၏အမည်ကိုသဘောတူခဲ့ကြသည်။ VSအရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ကျင်းပခဲ့သော Meghan Markle ၏ကလေးရေချိုးခန်းအတွင်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ အနာဂတ်မိခင်ဖြစ်သူမှာသူမသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ Amal Clooney အပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးတစ် ဦး မွေးဖွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အချိန်ဆွဲနေသော်လည်းနောက်ဆုံးပေါ်သတိပညာရှိသောသူသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုမီဒီယာတွင်မျှဝေခြင်းမပြုပါ။
Grand P သည် Eudoxie Yao နှင့်သူ၏လက်ထပ်သည့်နေ့ရက်ကိုဖော်ပြသည်။
Mac Davis၊ Elvis သီချင်းရေးဆရာနှင့်တိုင်းပြည်ကြယ်ပွင့်မှ ၇၈ နှစ်တွင်ကွယ်လွန်သွားသည်။
Antoine Arnault နှင့် Natalia Vodianova တို့သည်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ...
George Clooney ၏ဇနီးသည် Sussex ၏ Duchess of Duchess ကိုအမြဲတမ်းကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်ဟုဆိုရမည်။ အမှန်မှာ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်ရှိသည် Archi ရဲ့အမေကိုအကြံပေးနိုင်တယ် သူမသည် La Firme ၏တစိတ်တပိုင်းဖြစ်သော်လည်း လူမှုရေးညစာစားပွဲများမည်သို့ချဉ်းကပ်ရမည်၊ Kate Middleton နှင့်သူ၏ဆက်ဆံရေးကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုလေ့လာခြင်း, သို့မဟုတ်သူမနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သင့်ကြောင်းပရဟိတလုပ်ငန်းအပေါ်။ ယခုtheကရာဇ်ဘုရင်နှင့်ဝေးကွာသော Meghan Markle သည်လူ့အခွင့်အရေးအထူးပြုရှေ့နေကိုအမြဲတမ်းမှီခိုနေရပုံရသည်။ သူငယ်ချင်းနှစ် ဦး စလုံးသည် Los Angeles တွင်ရှိသည်။ အဘယ်သူသည်သိသည် - သင့်လျော်သောပုံစံပြန်လည်ဆုံဆည်း?
ရင်းမြစ် - https: //www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/amal-clooney-ce-secret-partage-avec-meghan-markle-et-jamais-trahi_453138
Alexis WAYAN 160 ရေးသားချက်များ0မှတ်ချက်များ
Go Pakgne Muriel Blanche နှင့် Poupy တို့သည်ရွာသားများအနေဖြင့်ကြယ်များအထိရယ်မောစေကြသည်။ ဤတွင်ဗွီဒီယိုပါ
Noso ရှိအကူအညီပေးရေးလုပ်သားတစ် ဦး အားရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်း - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အမျက်ဒေါသ
Mac Davis, Elvis သီချင်းရေးသူနှင့်တိုင်းပြည်၏ကြယ်ပွင့်၊ လူ ၇၈ ယောက်သေဆုံးသည်
Antoine Arnault နှင့် Natalia Vodianova တို့သည်သူတို့၏ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဖြစ်လူသိရှင်ကြားထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့သည်။
Royal POLL: မင်းသားဂျော့ခ်ျသည် Attenborough မှပေးသောရှေးဟောင်းသွားကိုပြန်ပေးသင့်သလား။ မဲ
မင်းသမီး Jackie Appiah သည်အာဖရိကသမ္မတတစ် ဦး နှင့်ကိုယ်ဝန်ရှိနေလိမ့်မည်။
Timothéeအပါအ ၀ င် Vanana Paradis၊
Vanessa Paradis သည်သတိကြီးစွာ ထား၍ Timothée Chalamet ကိုစောင့်ကြည့်သည်။
Xxx လိင်အသစ် xnxx ဗီဒီယိုလိင်ایکراتاکیلیٹچرکےساتھ! Littl …
Johnny Depp y Amber Heard, en los tribunales: arranca el juicio por …
Vanessa Paradis၊ ဒရာမာ၊ လီလီ - ရို့စ်အရမ်းနေမကောင်း၊
ဖလော်ရီဒါမှဆရာဝန်များသည် ၁၀၀% နီးပါးရှိသော coronavirus ကုထုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဂျော်နီ Depp နှင့် Amber Heard: မင်းသားကသူ၏အကြောင်းရင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။